Kusiyana Labor kudzivirirwa shangu uye vanhuwo neshangu Anonyanyowanika akaratidza 3 muzano - China Gaomi Ruigu Labor Protection
Kusiyana Labor kudzivirirwa shangu uye vanhuwo neshangu Anonyanyowanika akaratidza 3 muzano
Kusiyana shangu basa inishuwarenzi uye vanhuwo shangu dzinowanzotsigi- akaratidza 3 muzano, ndinotenda muri uyewo kuziva chii 3 pfungwa zvinoratidzwa.
1.According kuti musiyano iri kugadzirwa uzivi, basa kudzivirirwa shangu yakagadzirirwa kudzivirira yakachengeteka netsoka kushanda vanhu. Naizvozvo, kuchengeteka ndiko chikuru chokufunga munyaya magadzirirwo.
Chii munhuwo shangu inokurukura zvakawanda akanaka anonyaradza, mufashoni, magiramufomu, ndiko kuti tigutse zvido nezvinodiwa mutengi chete.
2.The musiyano kunooneka nokushandisa nzvimbo: dzakawanda kushandisa nzvimbo basa kudzivirira neshangu dziri chaiyo kushanda munzvimbo dzakadai electroplating workshop, kuvakwa uye guru fekitari muchini.
Vanhuwo shangu vanotofanira kushandiswa kufamba, kunotenga uye nzvimbo dzinowanika kufanana mahofisi pasina mikuru ngozi.
3. Kubva nemaonero rokuita zvinhu shangu pachavo, kusiyana zvinogona kuonekwa: vanhuwo shangu kazhinji yakagadzirwa zvavo nezvinhu, zvakadai Whitehead Textile jira pamusoro zvinhu, chakagadzirwa nedehwe, nezvimwewo, apo basa kudzivirirwa shangu zvinofanira kuitwa zvakanaka kuputira zvinhu , electrostatic zvinhu, cowhide, mukuru tembiricha kuzvidzivirira uye vamwe inokosha zvinhu.
Tisingatauri sole, vanhuwo shangu ndivo TPR outsole zvikurukuru, kubva pamusika ano, Labor kudzivirirwa shangu vari kunyanya kushandisa inogadziriswa rabha inotsika kana PU inotsika.
Post nguva: Aug-28-2018